Daawo:-Shacabka Buuhoodle ma Maamulka Somaliland ayey diidan yihiin mise Cali Khaliif Galaydh?-Video | | Horufadhi Online
Saturday, February 10th, 2018 | Posted by ho
Daawo:-Shacabka Buuhoodle ma Maamulka Somaliland ayey diidan yihiin mise Cali Khaliif Galaydh?-Video
Magaalada Buuhoodle waxaa maanta soo gaadhay C.rashidi Ducaale Qambi Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryaynta Maamulka Somaliland, waxaana Halkaasi kusoo dhoweeyay Qaar kamid ah odayaasha iyo Qaybaha bulshada.
Magaalada Buuhoodle ayaa dhibaatooyin badan ka tirsanaysa Somaliland, waxaa horay loo Xasuustaa in Madaxwaynha khaatumo lagu haystay Somaliland ayuu Noo wadaa ! maaha Somaliland ayuu ka tirsan yahay.
Hadaba maxay ka dhigan tahay Soo dhowaynta Wasiirka ka tirsan Xukuumadda Somaliland ? Buuhoodle ma Cali Khaliif ayay diidan tahay mise Somaliland iyo Qofka Xambaarsan Qadiyadeeda ?.
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=57023
Posted by ho on Feb 10 2018. Filed under wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
3 Comments for “Daawo:-Shacabka Buuhoodle ma Maamulka Somaliland ayey diidan yihiin mise Cali Khaliif Galaydh?-Video”
February 10, 2018 - 4:27 pm
Qofka wax diida ama yeela waa qof wax uun aamminsan. Buuhoodle ma iyadaa waxba diiddaba, intaan arkayey wixii u yimaadaba waa u niikinayeenw.
Midda kale, cali waxa uu lahaa Dhulbahaan matalaa oo aan magacooda ku hadlayaa, lkn nimankan kale waa niman maamul ka tiran. Iyagu waxa ay metelaan waa cidda mushaharka siisa ee ay hawsha u hayaan, kuma doodayaan maamul Dhulbahantaanu madax ka nahay. Marka Cali saasuu uga duwan yahay. Hadduu dhihi lahaa anoo Caliyaan Hargaysa u galay, oo xaqiiqduna sidaa tahay, cidiba sidaa uma danayseen, lkn waxa uu ku doodayaa anaa Dhulbahante masuul ka ah isagoon hal ISIMna wadan. Dhulbahantena waxa ay leeyihiin waar sidaasi sidaan kuu igmannay maaha nagumana meteshid. Haddaadse xaalka DULLAALNIMO ku soo khatintay, dee kuwayagaa na dullaalaya. Faratoon Js buu dullaal u yahay, Cali iyo Baashena Bahararsame, Keysena Barkad, iwm. Marka Cali runta loo sheegayna waa kii xidhxidh iyo Laaska u huleelay. Kooxdaasi waa kooxdii Hargaysa u shaqo tagtay.
Qoladii Xamar aaddayna shirbaannu isugu imaanaynaa GUGA haddii Alle idmo. Maamul baannu dhisaynaa la yiraahdo ‘FADLAN STATE OF SOMALIA’ Haruurlahaannu ku daraynaa qolada Hargaysa & Garoowe DULLAALASA.
February 11, 2018 - 6:35 am
Dhulbahanate Kooda ma jeecle kaa dantaa reeraha waday raban. Dhulbahante wuu sixeanyahay
dhulbahante qurbajoog collaadda iidoor Wagaashaa qurjiga ka gashay aoo ay al tiicayaan. Dhulbahante qolqol joog markii la caddadin waay, la sharfay, lasoo dhoweeyay, wax la taray bay Somaliland isugu biyo shubteen.
Dadku qabiliste ma aha markay arkaan wax wax u qabanaya. Bal eega Hablihii Iiddor siday ugu ciyaarayaan inanka yar ee Cagdheer iyo Hargeyusa iyo Burco ka amar ku taagleyn jiray ee habloohad dhalfada la dhici jiray beriggii Siyad barre.
Waxtarkaa muhiim. Haadh an myand baa la yidhaahdaa
Daawo:-Dowladda Soomaaliya oo deg deg uga jawaabtay Warbixintii Horufadhi Media ee dhanka Baddaha-Video
Daawo:-Muxuu Sheekh Keenyaawi kala soo kulmay markuu Khayre booqday Maanta-Video
Gaas iyo Deni midkee u roonaan Dowladda Federaalka Soomaaliya?
Daawo:-Abuukar Cumar Caddaan oo codsi culus u jeediyey Soomaalida-Video
Daawo:-Puntland oo sheegtay in ay qabatay Qaraxyo lala damacsanaa Dad shacab ah-Video
Daawo:-Warbixin xiiso leh oo ku saabsan Khayraadka Baddaha Soomaaliya iyo Dalalka shisheeye ee iska Dal dasha-Video
Daawo:-Shan qof oo loo xiray weerarkii Nairobi iyo magaca ninkii isku qarxiyay Hotel Dusit oo la shaaciyay-Video
Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday deegaanka Baar Sanguuni..